निषेधाज्ञाले मौरी पनि घार भित्रै ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार निषेधाज्ञाले मौरी पनि घार भित्रै !
देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा भएको एक महिना नाघिसकेको छ । नागरिक कोरोनाको संक्रमण कहिले मत्थर होला भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर, निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो, यसको असर कहिलेसम्म पर्ने हो थाहा छैन । कोरोना कहरबाट कृषि क्षेत्र पनि अछुतो छैन । आर्थिक गतिविधि र मानिसको चहलपहल नभएपछि किसान पनि मर्कामा छन् ।
कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेका बेला यसको कतै आंशिक त कतै पूर्ण असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । मल, बीउ, बिषादीको अभाव उत्तिकै छ । दूध, अण्डा, मासु उत्पादन तथा बिक्रीमा पनि यसले असर पारेको छ । अघिल्लो वर्षबाट मह उत्पादन ओरोलो लाग्दै जांँदा यसपटकको निषेधाज्ञाले मौरीपालक किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ । चरनको अभाव हुदै जांँदा मह उत्पादन पनि ह्रास हुँदै गएको हो ।
‘चरन पनि छैन ,उत्पादन पनि छैन, बिक्री पनि छैन ।’ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का मौरीपालक विष्णु भुषाल भन्छन् । यतिबेला वनलगायत स्थानीय बारी तथा खेतहरुमा फूल फुल्ने सिजन नहुंँदा मह उत्पादन पनि हुँदैन । भएका मौरीलाई चिनी चास्नी खुवाएर घारभित्रै पाल्नु पर्छ । “के गर्नु मौरी चराउनका लागि त दिइन्छ तर मौरीको हेरचाह गर्न भने निषेधाज्ञा भनेर दिइँदैन,” उनले भने, “महको माग त छ के गर्नु बिक्री गर्ने पसल नै नखुलेपछि ।” भुषालको जस्तै अवस्था जिल्लाका अन्य किसानको पनि छ ।
गतसाल देखि निषेधाज्ञाको मार खेपिरहेका मौरीपालक किसान यसवर्ष थप मारमा परेका हुन् । “चिनीको भाउ पनि बढ्यो, अब मौरीलार्ई बचाउने कि हामी बांँच्ने ?,” खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का किसान श्याम गुरुङ्गले भने । विगत केही दिनदेखिको हावाहुरी र पानीले घारभित्रका मौरी मर्न थालेको र रानो पनि उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए । कोरोना संक्रमणकै कारण उनले न बजारसम्म मह पुर्याउन सकेका छन् त उनको घरमा किन्न ग्राहक नै आएका छन् । “हामी अहिले घर भित्रै बस्नु परेको छ, मौरीलाई चिनी चास्नी खुवाएर घारभित्रै थुन्नु परेको छ,” गुरुङ्ले भने ।
कहिले चरन अभाव कहिले न्यून बिक्री त कहिल्यै उचित मूल्य नपाएकै कारण सधैं जसो नोक्सान बेहोर्दै आएको उनीहरु बताृँछन् । जसका कारण कतिपय किसान विस्थापित हुने क्रम छ त कतिपय किसान विस्थापित भइसकेका छन् । यसैबीच, केही नयांँ किसान आउने क्रम पनि छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्रर्वद्धन गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष खालको योजना नल्याउंँदा यो व्यवसायप्रति निराशा बढेको गुरुङ् बताउँछन् । मौरीको विस्तार र महको बिक्री मात्रै होइन मह उत्पादनमा वर्सेनि ह्रास आएको छ । जसका कारण उपभोक्तामा विदेशी महंगो मह अथवा नक्कली मह उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
“मौसममा व्यापक परिवर्तन छ । मौसममा फूलहरु फुलेका छैनन् । प्रशस्त रुपमा मौरीले चरन गर्न पाएका छैन,” मौरी विज्ञ डाक्टर खेमराज न्यौपाने भन्छन्, “फलफूल र बालीहरुमा प्रशस्त रस छैन । यसको असर मह उत्पादनमा परिरहेको छ ।” स्वदेशी उत्पादन र प्रर्वद्धनमा राज्यको उचित नीति नहुँदा यो व्यवसायमा थप आकर्षण हुन नसकेको उनले बताए ।
“वर्सेनि मौरी गोला विस्तार अनुपात र महकै उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ । यो चिन्ताको विषय हो,” उनी भन्छन्, “मौरीको भूमिका मह मात्र उत्पादन गर्ने मात्रै होइन परागसेचनको कारण खाद्यान्न बाली उत्पादनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ ।”
केही वर्षदेखि महको उत्पादन घट्दै गएपछि र यसको माग बढ्न थालेपछि नयांँ किसानहरु यस व्यवसायमा थपिए पनि उत्पादनमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । महको आयात प्रतिस्थापन र स्वच्छ शुद्ध मह उत्पादन गर्ने किसानको चाहना भए पनि उनीहरुलाई उत्साह प्रदान गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम नहुंँदा किसान निराश छन् । “यसपटकको बजेटले मौरीपालक किसानलाई सम्बोधन गरेन । आफ्नै देशमा पनि हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बांँच्नु परेको छ,” मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भने । उनका अनुसार उत्पादन घट्दै गएपछि यसको मूल्यमा केही बृद्धि भए पनि चरनको अभाव हुंँदै जांँदा मौरी मर्दै जाने र मह उत्पादन न्यून हुँदै गएको छ ।
“गतवर्ष भन्दा यसवर्ष ३० प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको छ,” उनले भने, “आगामी वर्ष थप उत्पादनमा ह्रास आउंँछ,” शर्मा भन्छन् । विगतका वर्षहरुमा प्रति घार २२ केजी मह उत्पादन भए पनि हाल प्रतिघार १५ देखि १६ केजी महमात्र उत्पाादन हुने गरेको शर्माको भनाइ छ । चितवनमा ३५ हजार मौरीको घार छन् भने किसानको संख्या पाँच सयको हाराहारीमा छ ।